UKUTSHINTSHA KWABANXIBILEYO BODUMO: IINKWENKWEZI EZITSHINTSHE IMITSHATO YAZO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Abatshintshi boMdaniso oMdaka oDumileyo: Iinkwenkwezi eziTshintshe phakathi kweMinyhadala kunye neReception
Abatshintshi boMdaniso oMdaka oDumileyo: Iinkwenkwezi eziTshintshe phakathi kweMinyhadala kunye neReception
Ngu: Knot 11/21/2018 nge-12: 55 PM
Ukukhetha okuninzi. Ngelixa ukufumanisa ukuba usuku olunye lomtshato lukhangeleka kungangumsebenzi otyhafisayo kuye nabani na, inani eliphezulu le-celebs likhethe ukunciphisa uxinzelelo ngokunxiba iigawuni ezininzi kunye neempahla zoncedo ukutshintsha ukusuka kumsitho uye kumsitho. UMandy Moore wayeyinkwenkwezi yakutshanje ukutshintsha inkangeleko yakhe, ngelixa abanye bathanda UKaley Cuoco kunye neDuchess yaseSussex UMeghan Markle bakhethe ukujongwa kabini okanye nangaphezulu ngosuku lwabo lomtshato. Jonga ezona zingezantsi.
Umdlali weqonga uhambe esuka kwilokhwe epinki uRodarte waya kwinombolo emnyama emnyama kulwamkelo lwakhe. Inkangeleko yayiquka ukusikwa okumnyama kunye noololiwe obude bomgangatho.
Iposi ekwabelwana ngalo nguMandy Moore (@mandymooremm) ngo-Novemba 20, 2018 kwi-2: 40 pm PST
(Ityala: UMandy Moore / Amabali e-Instagram)
Abaqulunqi bayathontelana ukuya kunxiba eyangaphambili Iisuti Umdlali weqonga ngaphambi komtshato wakhe neNkosana uHarry ngoMeyi 2018, iiDuchess ezisandula ukwenziwa zaphuma zaya kumtshato wakhe waseWindsor enxibe isinxibo esenziwe nguClare Waight Keller, umfazi wase-Bhritane kunye nomphathi wokuqala wabasetyhini waseGivenchy. Isilikhi, ikota yesithathu enemikhono ngokwayo ibonise i-bateau neckline evulekileyo ethe chu yahlangana esinqeni sayo.
Umlingisi waseMelika uMeghan Markle ufike kumsitho womtshato wokutshata iNkosana yaseBritane uHarry, uDuke waseSussex, eSt George's Chapel, eWindsor castle, eWindsor, nge-19 kaMeyi 2018. (Ifoto ngu-Andrew Matthews / POOL / AFP) (Ifoto yetyala kufuneka funda ANDREW MATTHEWS / AFP / Getty Izithombe)
Ukulandela ukwamkelwa kukaKumkanikazi kwinqaba kunye nemifanekiso yosapho, esi sibini emva koko saya eFrogmore House kulwamkelo lwangokuhlwa ngenani elisondeleyo lamalungu osapho kunye nabahlobo. Kweso siganeko, uMarkle ukhethe isinxibo esingenamikhono, esiphakamileyo sentamo ngumyili waseBritane uStella McCartney.
UMarkle wayengenguye yedwa owatsala utshintsho lwempahla ukusuka kumsitho ukuya kulwamkelo. Umyeni wakhe, iNkosana uHarry, naye utshintshile kwiyunifomu yakhe eyenzelwe yena wangena kwi-tuxedo ebukhali nguTom Ford kulwamkelo lwabo lwangokuhlwa.
Inkqubo ye- Ithiyori enkulu yeBang Bang Umdlali weqonga uhambe esuka kwilokhwe entle ka-Reem Acra egqibezele ikapa kumsitho wakhe womtshato wefama uKarl Cook waya kwi-jumpsuit yokwamkela kwakhe. Ukulandela umsitho wangaphandle wesibini (owawubonisa izilwanyana zabo ezininzi), uCuoco wakhetha umdaniso onobungane ngakumbi, i-lace jumpsuit ene-necklow scalloped neckline.
Ok masenze itheko !!! Ubhale nge-Instagram.
Ngokomthetho KCSQUARED 6-30-18 ❤️
Iposi ekwabelwana ngalo ngu- @ normancook NgoJuni 30, 2018 nge-10: 56 pm PDT
Ok masenze itheko !!! #kcsquared
Iposi ekwabelwana ngalo ngu- @ normancook NgoJuni 30, 2018 kwi-11: 18 pm PDT
Logama nje uKnowles
Kumsitho wakhe womtshato waseNew Orleans ngo-Novemba ngo-2014, imvumi yanxiba uthotho lweengubo ezintandathu ezahlukeneyo ezimhlophe. U-Knowles wayebukeka eqaqambile xa wayedibana nomyeni wakhe UAlan Ferguson esibingelelweni unxibe ilokhwe ethozamileyo, enemibala-bala kunye ne-Cape ehambelana nomgangatho wobude. Emva komsitho, watshintsha wanxiba iimpahla ezimdaka, ezinxibe umqala ongena nzulu entanyeni.
ENEW ORLEANS, LA-NOVEMBA 16: Imvumi uSolange Knowles (enxibe umhlangano wangaphambi komsitho nguStephane Rolland) kunye nomlingane wakhe, umlawuli wevidiyo yomculo uAlan Ferguson, bakhwela iibhayisekile ezitalatweni zekota yeFrance xa besiya kumsitho wabo womtshato eMarigny I-Opera House ngo-Novemba 16, 2014 eNew Orleans, eLouisana. (Ifoto nguJosh Brastead / WireImage)
Iposi ekwabelwana ngalo nguBeyoncé (@beyonce) nge-16 kaNovemba 2014 ngo-7: 21 pm PST
Iposi ekwabelwana ngalo nguBeyoncé (@beyonce) nge-16 kaNovemba 2014 ngo-7: 27 pm PST
Xa umyili wefashoni watshata nemvumi UWilliam Xelela NgoSeptemba 2014, wayenxibe isinxibo esimnandi saseBadgley Mischka Couture esihonjiswe ngamakristali, iiparele kunye noololiwe abali-10.
Iposi ekwabelwana ngalo nguLauren Conrad (@laurenconrad) ngo-Sep 13, 2016 ngo-2: 28 pm PDT
Ndiza kuthetha oku: Oko ngekhe kube yimeko yamaphupha ngaphezulu, uJames Mischka uxelele I-Knot ngo-2016. Wayethandeka kakhulu… Okokuqala, mhle, unceda, kwaye ke ulumkile kwaye unomdla kwaye uyahlekisa, kwaye yena kwakumnandi ukusebenza naye. Andiqondi ukuba ibinokuhamba ngcono kunokuba ibenzile.
Phambi kolwamkelo, i Iinduli I-alum ityibilikile kwinto ebintofontofo, kodwa intle ngokulinganayo: Isinxibo esine-strandless Monique Lhuillier esinebhanti elincinci kunye nesaphetha ngasemva.
Ndiyakuvuyela @laurenconrad ngomtshato wakho! Ukhangeleka umhle kwilokhwe yakho #moniquelhuillier #mlbride #love
Iposi ekwabelwana ngalo ngu UMonique Lhuillier (@moniquelhuillier) ngo-Sep 19, 2014 ngo-9: 11 kusasa PDT
NgoSeptemba 2013, le modeli yokuqubha imvumi etshatileyo UJohn Legend , kwaye endaweni yokuthengela ingubo enye egqibeleleyo, ukhethe iilokhwe ezintathu ezintle zikaVera Wang!
Iposti ekwabelwana ngayo chrissy teigen (@chrissyteigen) Nge-Sep 15, 2013 ngo-7: 30 kusasa PDT
Kumsitho, uTeigen wanxiba ingubo yebhola engenantambo ngesiketi esikhulu se-tulle ngaphambi kokuba atshintshe abe sisinxibo sakhe sokwamkela- isinxibo esimfaneleyo, nesinxibo se-mermaid. Kumcimbi wasemva kwepati, wakhetha ukunxiba ngokungqombela, ebomvu krwe, eyayimgona yonke ijika.
Oku Ukenza ngokugqibelele inkwenkwezi yehla ezantsi kwephambili kwi-tulle emangazayo Reem Acra ingubo yebhola yomtshato wakhe kaSeptemba 2016 kumdlali weqonga Skylar Astin . Emva komsitho, watshintsha wanxiba iimpahla ezimyoli, ezinentsiba ngumyili uHayley Paige, kwaye wadanisa ubusuku bonke kwizihlangu ezithandekayo eziphezulu.
Ngamanye amaxesha kufuneka unxibe ilokhwe yakho! Enkosi @ rodortega4hair kunye @jennstreicher nge pic kunye nokwenza kwam ❤️u @highheelprncess @reem_acra
Isithuba ekwabelwana ngaso ngu-Anna Camp (@therealannacamp) ngo-Sep 12, 2016 ngo-7: 36 pm PDT
#CRAVE Iintsiba, umtya kunye negolide iiteki ezenza emva kokuba amaqela edanise embindini .. Enkosi @misshayleypaige ngengubo entle kunye @jlm_couture ngayo yonke into! Wayeyithanda! Ifoto: @katieshuler @tessalynevents @jonbrownisamazing wanyikima itheko nzima!
Isithuba ekwabelwana ngaso ngu-Anna Camp (@therealannacamp) ngo-Sep 13, 2016 ngo-9: 24 kusasa PDT
Uye wayinyikimisa ngeziteki zegolide! UPaige uxelele kamva Ingcaciso. Ndicinga ukuba yinto entle kakhulu kwaye ilungiselelwe umntu. Ndicinga ukuba iyathetha ngento yokuba umtshakazi kwesi sizukulwana angazenzela eyakhe imithetho kwaye enze into ethetha naye ngokwenyani kwinqanaba lomntu.
UKardashian wothuka xa watshata Kanye West eFlorence, e-Itali, ngoMeyi ka-2014. Kumsitho, wanxiba ilokhwe yesinxibo ethobekileyo, enentambo ye-Givenchy Haute Couture, kunye ne-frock yakhe yokwamkela yayiliqhekeza elifutshane, elinomtsalane, nelikhrimu ngu-Balmain.
Ukuphefumla… .sengubo entle kangaka @ riccardotisci17 !!! #Givenchy #Stunning #Love #herecomesthebride
Iposi ekwabelwana ngalo nguKris Jenner (@krisjenner) ngoMeyi 27, 2014 ngo-9: 15 kusasa PDT
Iposi ekwabelwana ngalo nguKim Kardashian West (@kimkardashian) ngoMeyi 27, 2014 kwi-7: 58 pm PDT
Iposi ekwabelwana ngalo nguKim Kardashian West (@kimkardashian) ngoMeyi 24, 2015 nge-12: 26 pm PDT
Oku Ukudanisa ngeenkwenkwezi utshatile URobert Herjavec ngoJulayi ka-2016 Itanki yeShark inkwenkwezi yaxutywa ngumtshakazi njengoko wayehamba ezantsi kwistayile engenamtya, elayishwe nguMonique Lhuillier.
Umtshato kaKym Johnson noRobert Herjavec. (Ityala lemifanekiso: Anthony Vazquez Photography)
Ukwamkelwa komtshato kaKym Johnson noRobert Herjavec ocwangciswe nguMikie Russo. (Ityala lemifanekiso: Anthony Vazquez Photography)
Emva komsitho, uJohnson watshintsha waba linombolo yesiko eyenziweyo eyenziwe yi I-DWTS isebe elinxibe impahla. Uyilo lubonisa intamo ejijayo kunye nesheer, isiketi se-tulle – esilungele iiyure zokudanisa.
Ngaphezulu kweveki yakhe yomtshato ngo-Novemba ka-2015, oku Usapho lwale mihla inkwenkwezi ayinxibanga ngaphantsi kwesihlanu imbonakalo eyahlukileyo! Umdlali we-actress wadibana nothando lwakhe UJoe Manganiello esibingelelweni unxibe isambatho esimangalisayo, esenziwe ngesandla, esenziwe ngamaso.
Iposi ekwabelwana ngalo nguSofia Vergara (@sofiavergara) ngo-Novemba 22, 2016 nge-12: 27 pm PST
Ndisonwabile isikhumbuzo sokuqala kuthando lobomi bam! 11.22.15
Iposi ekwabelwana ngalo nguJoe Manganiello (@joemanganiello) nge-22 kaNovemba 2016 ngo-12: 33 pm PST
UVergara waphalaza isiketi esinokwamkelwa kulwamkelo, wamnxibisa ilokhwe yakhe emdaka yesitrato kunye nesacholo esintsonkothileyo, ukulungelelanisa isongo sedayimane namacici.
Yayingumzuzu womtshato obonakalayo xa iiDuchess zaseCambridge zaphuma zinxibe impahla entle, enemikhono, yelokhwe uAlexander McQueen eyenzelwe nguSara Burton ngo-Epreli ka-2011.
Umama wexesha elizayo wabathathu emva koko watshintsha wanxiba ilokhwe yesibini yokwamkelwa kwakhe ngokuhlwa kunye neNkosana uWilliam. Isiqwenga, naso nguBurton, sasiyinto elula, isilika, nenamba yeendlovu eyayiquka idamantini eqhina esinqeni sayo. IDuchess yaseCambridge esandula ukuveliswa ikhethe ukugubungela amagxa ayo nge-angora bolero.
I-LONDON, ENGLAND-APRILI 29: UCatherine Middleton ubhekisa kwizihlwele njengoko udade wabo kunye nesicakakazi se-Honor Pippa Middleton bebambe ilokhwe yakhe ngaphambi kokuba baye e-Abbey ukuya kumtshato wasebukhosini weNkosana uWilliam ukuya ku-Catherine Middleton eWestminster Abbey ngo-Epreli 29, 2011. eLondon, eNgilani. Umtshato wesibini emgceni wetrone yase-Bhritane uza kukhokelwa ngu-Archbishop wase-Canterbury kwaye uzokuzimasa ziindwendwe ze-1900, kubandakanya namalungu osapho lwasebukhosini angaphandle kunye neentloko zikarhulumente. Amawakawaka abantu abafuna okuhle abavela kwihlabathi liphela baye bathontelana ukuya eLondon ukuza kubukela umnyhadala kunye nemiboniso yomtshato wasebukhosini. (Ifoto ngu-Pascal Le Segretain / imifanekiso ka-Getty)
ILONDON, IUNITED KINGDOM - APRILI 29: UCatherine, iDuchess yaseCambridge (L) kunye noCamilla, iiDuchess zaseCornwall bayishiya iClarence House baya eBuckingham Palace kwimibhiyozo yangokuhlwa emva komtshato wabo neNkosana uWilliam, iDuke yaseCambridge nge-29 ka-Epreli 2011. ILondon, eNgilani. Umtshato wesibini emgceni wetrone yase-Bhritane wakhokelwa ngu-Archbishop wase-Canterbury kwaye wazinyaswa ziindwendwe ezili-1900, kubandakanya namalungu osapho lwasebukhosini angaphandle kunye neentloko zikarhulumente. Amawakawaka abantu abafuna okuhle abavela kwihlabathi liphela baye bathontelana ukuya eLondon ukuza kubukela umnyhadala kunye nemiboniso yomtshato wasebukhosini. (Ifoto ngu-John Stillwell-I-WPA Pool / imifanekiso ka-Getty)
Ingoma ka-brenda kunye neMacaulay culkin utshatile
imisebenzi ekufuneka niyenze njengesibini
Ngubani ofumana i-boutonniere emtshatweni
ngaba u hoda kotb utshatile
umama webhulukhwe iisuti